Nepali Keti Ko Chikai: मामा घर जादा चिकाइको मज्जा
मलाई कताकता कुतकुती लागि रहेको थियो र मेरो आङ्ग पनि सिरिङ्ग भई रहेको थियो । उसले अब मेरो स्तनमाथि कुहिनो राखेर धक्का दिन थाल्यो । म भरखर १६ वर्ष पुगेकी तरुनी युवती भएकी र कसैले मेरो स्तनमा आजसम्म नछोएकोले गर्दा मलाई कस्तोकस्तो अनुभव भइरहेको थियो । मेरो स्तन पनि ठूलो र साह्रो थियो । मैले स्तनमा कसिलो ब्रा लगाएको हुँदा मेरो टि सर्टबाट स्तन माथि उठेको थियो । पुष्ट स्तन भएकोले उसको कुहिनोले मेरो स्तनमा धक्का दिदाँ मलाई कताकता आनन्द भए जस्तो लाग्न थाल्यो ।
उसलाई विचार गर्दा उ पनि फोटो हेर्ने निहूले मेरो स्तन मसाज गर्न व्यस्त थियो र उसको अनुहार रातो भएको थियो । यसरी पटकपटक उसको कुहिनोले मेरो कसिलो स्तनमा धक्का दिदाँ मलाई अत्यन्त मज्जा आउँन थाल्यो र मेरो तल योनीबाट पानी बग्न थाल्यो । यसो उसको तल हेरेको त पेन्टबाट उसको लाँडो ठन्केर माथि उठेको रहेछ । अब उसलाई पनि खपी नसक्नु भइसकेको रहेछ । उसले त अव कुहिनोले स्तनमा धक्का दिन छोडेर दुबै हातले मेरो कसिलो स्तन माड्न थाल्यो । अब भने मलाई पनि खपी नसक्नु भयो । मेरो पुतीबाट पानी बगेर मेरो पेन्टी पुरै भिजेर मेरो पेन्टमा समेत लाग्न थाल्यो । उसले मेरो स्तन माड्दै मेरो टि सर्ट खोल्यो अनि कोठाको ढोका लगायो र मलाई विस्तारै ओछ्यानमा सुतायो । उसले मेरो पेन्ट पनि खोलिदियो । अब मेरो शरीरमा लुगा टु पीस मात्र बाकी रह्यो । उसले मेरो रातो ब्रा भित्र रहेको ठूलो र माथि उठेको कसिलो स्तन एकटकले हेर्यो र उसको हातले मेरो हात समाती उसको लाडोमा राख्यो । अनि विस्तारै ब्रा माथिबाट माड्न थाल्यो । घरिघरि मेरो हात समातेर लाडोमा दल्न थाल्यो । उसले मेरो स्तन माड्दै तल पुतीमा पनि खेलाउँन थाल्यो । केहीबेरमा उसले उसको जम्म ै लुगा खोल्यो । उसको लाडो ठनक्क भएर ठन्केको थियो । मैले आजसम्म कसैको लाडो नदेखेको हुँदा मलाई अचम्म लाग्यो कि केटाको लाडो ठन्कदा कत्रो ठूलो हुँदोरहेछ ।
Labels: मामा घर जादा चिकाइको मज्जा
Taapsee Neha May 17, 2014 at 9:29 AM
Bikash July 18, 2014 at 4:36 AM
I'm male 30. If girls want real sex (safe, secret andalot of enjoy) in Kathmandu contact me at bobsie01@gmail.com.
I'm not gigolo. I will give you the real meaning of SEX.